> Resource > Ladnaansho > ThinkPad Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga qorka ThinkPad
Waxaan ka qorka ThinkPad soo ceshano kartaa Data?
My dhibaato waa in aan si kama saaray video ah ka qor Lenovo ThinkPad. Waxaan ognahay in ay tani waa qalad weyn, laakiin sida aan aan video dib ugu heli kartaa qof ii sheegi kara? Run ahaantii waxaan u baahanahay caawimaad. Fadlan ii caawin!
Is dejiya! Your video weli waa ku wadid aad ThinkPad buug ee adag. Waxa kaliya sida calaamad oo xogta sida geli karin, laakiin waxa ay si fudud overwritten karo by files cusub on your computer. Si ay dib u hanato in video saaro, aad u baahan tahay si ay u joojiso isticmaalka buug ThinkPad aad iyo aad u hesho barnaamijka xogta ThinkPad ah ee Internet-ka si ay kuu caawiyaan.
Wondershare Data Recovery noqon mid ka mid ah xalka ugu wanaagsan ee lagu soo ceshano xogta ka qor ThinkPad aad karto, wax dhib ah maleh xogta lumay, maxaa yeelay, aad tirtirka shil ama ula kac ah, ama xijaab formatting drive adag, ama xataa nidaamka baadi iyo weerar virus. Ayaad ugu soo ceshano karaan faylasha sida image, video, file maqal ah, dukumenti, file archive iyo ka badan oo ka qor ThinkPad ah hawlaha yar gudahood.
Hel version tijaabo ah Wondershare Data Recovery ah inuu ka soo kabsado xogta ka qor ThinkPad hadda!
Qabtaan Lenovo ThinkPad Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada
Marka bilaabay qalab ku saabsan buug Lenovo, aad arki doonaa suuqa kala ah 3 hababka soo kabashada iyo doorasho soo kabashada resume.
Halkan aynu dooro "lumay Recovery File" mode hore. Tani waa hab loogu talagalay in aad ka bogsato files tirtiray ama formatted ka wadid aad ThinkPad buug ee adag.
Fiiro gaar ah: In si looga fogaado xogta overwritten, fadlan ha soo dajiyo barnaamij ku saabsan xijaab in faylasha aad ayaa laga badiyay ka.
Tallaabada 2 Sawirka xijaab aad ThinkPad buug ay u raadiyaan files lumay
Dhammaan qoruhu ku qor ThinkPad aad la ogaan doonaa oo muujiyey barnaamijka. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ka mid ah ka dibna riix "Start" in iskaan Risaalo.
Haddii files ayaa formatted ka hadlo xijaab aad ThinkPad qor, waxaad u baahan doontaa in aad si firfircoon "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 ceshano Data ka qor ThinkPad
Dhammaan files helay lagu soo bandhigi doonaa "Nooca File" ama "Jidka" qaybood ee suuqa kala barnaamijka dib markii iskaanka. Waxaad ka arki kartaa magacyada file si loo hubiyo in xogta aad badiyay la kama uusan soo kabsan karaan ama.
Markaas kaliya aad u baahan tahay si ay u xusaan faylasha aad rabto oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga ku soo celi si aad buug Lenovo ThinkPad badbaadiyo.
Si looga hortago faylasha ka soo kabsaday la overwritten, fadlan aad files lumay on xijaab kale oo buug ThinkPad aad.
Rocstor Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Rocstor Hard Drive